Ciyaaryahan Eden Hazard oo u rumoowday riyadiisii – hareerley News
Riyadii Eden Hazard ee ku aadan inuu noqdo saxiixa ugu weyn kooxda Real Madrid ayaa ugu danbeyntii rumowday xagaagan.
Xiddiga reer Belguim ayaa loo ogolaaday inuu ku biiro kooxda Los Blancos, oo bixisay qiimo 90 milyan ginni markii ay kala soo wareegayeen kooxda Chelsea.
Waxa uu ka tagay Stamford Bridge isaga oo uu u rajeynayay wanaag qof walba oo ka tirsan Chelsea ka dib markii uu siiyay Blues toddobo xilli ciyaareed oo xusuus mudan.
Ku dhawaad 50,000 taageerayaal Real Madrid ah ayaa u soo dhoweeyey si qurux badan horaantii xagaagan markii lasoo bandhigayay.
Kani wuxuu ahaa saxiixa riyada ee Madridistas badan ay doonayeen. Hazard waxaa lagu doodi karaa inuu yahay ciyaaryahankii ugu fiican Premier League;
Xiddig heer caalami ah oo leh tayo uu ku dhiiri geliyo naadigiisa cusub ayaa ku faani kara inuu ku guuleystay tartamada ugu sharafta badan kubadda cagta.
28-jirkan, oo xiranaya lambarka 50-aad ee Madrid, ayaa saameyn wanaagsan ku yeelan kulankiisii ugu horreeyay ee uu ka horyimid Bayern Munich horaantii bishaan.
Horyaalka Ingiriiska Oo Khasaaray $1 Billion Sanadkan
Posted on June 14, 2020 June 14, 2020 Author Hareerley News
Horyaalka kubadda Cagta ee dalka Ingiriiska ayaa u muuqda mid khasaaraya Adduun lacageed oo dhan $1 billion, sida uu sheegay macahadka arimaha dhaqaalaha ee Deloitte. Kooxaha labaatanka ah ee ka dheela horyaalka Ugu sareeya Ingiriiska ayaa xili-Ciyaareedkii hore waxay macaasheen lacag dhan $5 billion, waxayse ahayd lacagtii ugu badnayd ee horyaalka naadiyada ee dalka Ingiriisku […]
Somaliland oo Odayaal kasoo jeeda Galmudug ku wareejisay Dhalinyaro ku xirneyd Hargeyso:(Sawiro)